चङ्गा-चीनको एक अनुपम उपहार (भाग-1) - China Radio International
चङ्गा-चीनको एक अनुपम उपहार (भाग-1)
(GMT+08:00) 2016-10-02 15:26:31
बसन्त ऋतुको आगमनसँगै पैचिङ केहि तातिन थाल्छ। करिब पाँच महिनाजसो जाडो र चिसो हुने पैचिङले बसन्त चाड मनाउँदा पनि तालतलैयाको पानी चलायमान भइसकेको हुँदैन। तर ग्रिगेरियन पात्रोनुसार, अप्रिल महिनामा आएर पैचिङ तङ्ग्रिन थाल्छ। ता पनि चिसो स्याँठले मनुवालाई अझै कक्रन बाध्य बनाउँछ। अनि यही हावाको वेग क्रमशः केही न्यानो बन्दै जान्छ। त्यसपछि पार्क, उद्यानमा मानिसको भीड पनि बढ्दै जान्छ। विभिन्न खालका रमिता र रमितेसँगै चङ्गा उडाउने चङ्गाप्रेमी पनि देखिन थाल्छन्। एक प्रकारले भन्दा करिब पाँच महिनादेखि निस्सासिएका मनहरू आकाशमा उडेझैं लाग्छ।
यस अवधिमा साँझ, बिहान र राती पनि चङ्गा उडिरहेको देख्नसकिन्छ। लाग्छ कहिले त्यो कुनै चरा पो हो कि? त्यस्तै रातीको चङ्गामा बत्ती या रिफ्लेक्टर राखिएको हुन्छ अनि परबाट हेर्दा कतै तारा हो कि या कुनै हवाईजहाज भन्ने पनि लाग्छ। विभिन्न आकारका चङ्गा र साथै धागोमा पनि विभिन्न झिलीमिली खाले र प्रकाश फाल्ने जडिएको हुन्छ र रातको अँध्यारोमा आकाश नै झिलीमिली देखिन्छ।
घरदेशमा चङ्गा उडाउन शरदीय ऋतु कुर्न पर्छ। हुन त बसन्त ऋतुको वायुमा पनि चङ्गा उडाउने गरेको देखिन्छ तर नगन्य मात्रामा। दशैंको अवसरमा विद्यार्थीहरूको विदा भएकोले र शरदको पवन पनि अति वेगिलो हुने र देशैभर यस अवधिमा मौसम पनि अति नै राम्रो भएकोले यस समयमा नेपालमा चङ्गा उडाइन्छ। अनि धागोमा माझा लगाउने, चङ्गा उडाउने अनि अर्काको चङ्गा चेत गर्न पाए रमाउने त्यसै गरी केटाहरू चेत भएका चङ्गा टिप्न दौडिने र छतमा चेत भएका चङ्गाको धागो तान्ने त्यस्तै चङ्गा थाकथुक पार्ने यसरी चङ्गा उडाइन्छ।
यता भने चङ्गा उडाउने कसैको चङ्गा काट्नलाई होइन। पूर्ण रुपमा समय बिताउने सौखिन खेल। अर्को यहाँको आकर्षण भनेको चङ्गाको आकार। उतातिर एकै प्रकारको चङ्गा हुन्छ र चङ्गामा टाँसिएका कागजको रङ्ग र आकारले चङ्गाको नाम दिइन्छ। दुई धर्के, पानको पात, बाबाच्या यस्तै-यस्तै अनि पछिल्लो समयमा चलचित्रको नाम या पोस्टर शैलीका चङ्गा देखिन थाले। त्यस्तै यता र उताको लटाइँ पनि फरक छ र अर्को कुरा भनेको बालबच्चा भन्दा वयस्क र प्रौढले एक सोखिन खेलको रुपमा चङ्गा उडाउने गरेको देखिन्छ। साथै अप्रिल र मै महिनामा चीनका विभिन्न शहरहरूमा चङ्गा महोत्सव पनि आयोजना हुने गर्छ।
चीनको शान्तोङ प्रान्तको वइफाङ शहरको अन्तर्राष्ट्रिय चङ्गा महोत्सव विश्व कै एक प्रसिद्ध र चङ्गाप्रेमीका लागि उचित गन्तव्यस्थल बनेको छ। यहाँ हरेक वर्षको अप्रिल महिनामा चङ्गा महोत्सव आयोजना हुँदै आएको छ। चङ्गाको विकासपछि नै यहाँ चङ्गा उडाउनु एउटा परम्परा बनिसकेकोमा पछिल्लो समयमा प्रतियोगिता समेत आयोजना हुँदै आएको छ। यहाँ वार्षिक रुपमा अप्रिल महिनामा आयोजना हुने चङ्गा महोत्सवमा सयौंको संख्यामा देशीविदेशी चङ्गाप्रेमीहरू सहभागी तथा प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छन्। वइफाङले चङ्गाको इतिहास र परम्परा मात्र बोकेको छैन यहाँको चङ्गा बनाउने शैली पनि प्रसिद्ध छ। गुणस्तरीय हुनुका साथै सुन्दर चित्र चित्रित, रङ्गीन तथा कलात्मक र उत्कृष्ट हुने चङ्गाप्रेमी र पारखीको भनाइ रहेको छ। वइफाङ बाहेक पैचिङ, थ्येनचिङ र चियाङसुको नानथोङ शहर पनि चङ्गाका लागि कहलिएको छ।
यस्तै पैचिङमा आयोजना हुँदै आएका चङ्गा महोत्सव तथा प्रतियोगितामा केही वर्षदेखि यो पङ्क्तिकार पनि पुग्ने गरेको छ। चङ्गा उडाउन नभइ एक दर्शकको रुपमा।
सन् 2016को अप्रिल-मै महिनामा दुई-तीन वटा चङ्गा महोत्सवमा दर्शकको रुपमा सहभागी हुने अवसर मिलेको थियो। त्यहाँ विभिन्न आकारका उडिरहेका चङ्गालाई हेर्ने, त्यसै गरी छुने, समात्ने र उडिरहेका चङ्गालाई आफैले बालावस्थामा चङ्गा उडाउन नजाँदाको जस्तो गरी लटाईँ समाइ र विभिन्न देश र क्षेत्रबाट आएका चङ्गाप्रेमीसँगको भेट पनि रोचक नै रह्यो। तर अघिल्लो वर्षको महोत्सवमा पहिलो सहभागिता भएकोले पनि हो कि त्यो खास कथनीय छ।
सन् 2015 अप्रिल 11 तारिख शनिबार सिआरआईले पुन एक पटक यूआन पो यूआन (पैचिङ गार्डेन) जाने अवसर मिलाइदिए अनुसार त्यहाँ 15औं बेजिङ्ग अन्तर्राष्ट्रिय चङ्गा महोत्सवमा सहभागी हुने मौका मिलेको थियो। त्यसअघि यूआन पो यूआनमा अन्तर्राष्ट्रिय बागबानी मेलाको उद्घाटन समारोहमा जाने मौका मिलेको थियो जसमा नेपालको पनि सहभागिता थियो। यस पटक पनि सिआरआईका विभिन्न विभागबाट हामी विदेशी पत्रकारहरु सो महोत्सवमा सहभागी भएका थियौँ। साथै त्यहाँ पैचिङमा बसेर विभिन्न संघसंस्थामा काम गरिरहेका अन्य दर्जनौँ विदेशीहरु पनि थिए। र त्यसै गरी 15 वटा देशका विदेशी चङ्गाप्रेमीहरू पनि सहभागी हुनआएका थिए। साथै चीनको 14 वटा प्रान्त र चीनको मकाउ र थाइ वानका प्रतियोगीहरू थिए। प्रतियोगिता भने चिनियाँहरूबीच मात्र थियो र यसरी प्रतियोगी मात्र 120 जना थिए। यस अघि पार्कमा र कतै सुभनियर पसलमा देखेका भन्दा पनि भिन्न खाल र आकारका चङ्गाहरू हेर्न पाइयो। सय मिटर लामो ड्रेगन आकारको चङ्गा, सुन्दरी महिला वास्तविक आकारकै चङ्गा, साइकल आकार, चरा, शिशी, थरिथरिका आकारका थिए। यस्तै त्यस बखत एउटा जोडि खास थियो। चङ्गामा दुई मानिसको चित्रसहित काइट कपल लेखिएको थियो र त्यो चङ्गाका मालिकहरू सही अर्थमा दम्पति अर्थात् जोडि थिए। अमेरिकी पुरुष र थाइल्याण्ड्ली महिलाको यो जोडिको विवाह भएको बीस वर्ष भइसकेको त्यहाँ जानकारी पाइयो।
त्यस दिन विभिन्न आकारका चङ्गा उडेको मात्रै होइन त्यसै गरी आफैले पनि चङ्गा बनाएं। बाल्यकाल सम्झाइदियो। सानो छँदा आफैले पनि धेरै पटक चङ्गा बनाएको थिएं। कुनै चङ्गा च्यात्यो भने त्यसको सिन्का झिकी चङ्गा बनाउँथे अनि कहिले बाँसका टुक्रा भेटे पनि चङ्गा बनाउने गरेको थिएं र नेपाली कागजको चङ्गा बनाउँदा मज्जाले उड्थ्यो पनि। तर एउटा कुरा त्यस बेला प्लास्टिकको चङ्गा बनाउने विचार गरिन् क्यारे। अनि तपाईँले नि? मात्र कागज त्यो पनि पाएसम्म नेपाली कागजको मात्र चङ्गा बनाइ उडाएको थिएं क्यारे। कति रमाइला थिए ती दिनहरू, ती पलहरू। आज, अहिले सम्झनाको धागोमा बाँधिएर चङ्गा झैं उडेको छु। यहाँ चङ्गा बनाउने कागज पुरै तयारी यानि कि सामान्य चरा-चङ्गा आकारको थियो र मसिना काठ या बाँसका लामा सिन्का पनि थियो र टाँस्ने गम पनि। सजिलैसँग चङ्गा बनाइयो र चङ्गाको कागज भने नेपाली कागज जस्तोजस्तो अनि प्लास्टिक र कपडा झैं थियो, यस्तै-यस्तै मिसिएको जस्तो थियो। अनि धागोले चङ्गामा कका राख्ने तरिका पनि त्यस्तै नै। एक पटक म फेरि सानो बालक झैं भए। आफूले बनाएको चङ्गा पैचिङको बसन्ती हावामा उडाएं। जुध्न आए धेरै धागो थिएन चेत हुने सम्भावना प्रबल थियो तर यहाँ चङ्गा काट्नलाई अर्थात् चङ्गा चेत गर्न उडाइदैन। त्यसकारण खासै भन्नुपर्दा मेरो अनुभव मिश्रति रह्यो।
यसै पार्क तथा गार्डेनको एउटा भवनमा त्यस महोत्सवको समयमा अस्थायी चङ्गा सङ्ग्रहालय नै स्थापना गरिएको थियो। थरिथरिका चङ्गा सजाइएको थियो त्यसले मन थाकथुक लियो। थाकथुक लिने यो चङ्गाको उत्पति कसरी भयो त?
चङ्गाको उत्पत्ति बारे अर्को श्रृंखलामा। (यी तस्वीरहरु सबै लेखक स्वयंले खिचेका हुन्।)